A ga-emepe talọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ 700 New na Ogwe ga-emeghe n'Africa site na 2025
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » A ga-emepe talọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ 700 New na Ogwe ga-emeghe n'Africa site na 2025
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
A ọhụrụ ọmụmụ tọhapụrụ na Nzukọ Hotellọ Ọrụ Na-ahụ Maka Hotellọ Afrika (AHIF) buru amụma na a ga-emepe ụlọ oriri na ọ barsụ 700ụ ọhụrụ na ụlọ nkwari akụ 2025 n'Africa ka ọ na-erule 410, na họtel họpụtara nke mba ụwa. Amụma ahụ dabere na nyocha nke KEANE n'ime ebe 100 F&B gafere 10 họpụtara aha ụlọ ọrụ ụwa niile na isi obodo XNUMX dị n'Africa na akụkọ nlekọta pipeline nkwalite nkwari akụ W.
Stefan Breg, Director Strategy Group nke KEANE kwuru, sị: “N'ime afọ iri asaa gara aga, e wuru ahịa ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ n'ụwa niile n'okwu atọ; obodo na obodo ndi na etolite, nkesa sara mbara na ndi n’etolite etolite. Mgbe ị na-eburu n'uche na ọnụego atụmanya nke mmepe obodo, nke a na-atụ anya gafee Africa, ga-akarị India na China n'afọ iri abụọ na ise na-abịanụ, Africa ga-aghọ otu n'ime ebe nkiri kachasị mma n'ụwa. ”
Ọ kọwara na họtelu ndị dị n'Afrịka nwere ike ịgbaso ụzọ dị iche iche maka F&B. Nke mbu, ihe nlere nke European / North America nke 2-3 ebe a na-acho F&B kwa ulo oriri na nkwari egwu F&B na-egwu egwu nke ulo nke ulo. Uzo ozo bu Middle East / Dubai nke uzo ano ma obu karia, nke ha ruru, na ejikota ya na ndi ozo; ihe ndapụta ebe F&B na-arụ ọ bụghị naanị ọrụ dị oke mkpa kamakwa isi iyi dị mkpa.
Ndị na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ na-elekwasị anya na arụmọrụ nke F&B mmewere nke azụmaahịa ha, na-ahụ na ha na-enye ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ hotelụ andụ na ndị masịrị obodo ha. Na mkparịta ụka mkparịta ụka na AHIF banyere onyinye F&B nkwari akụ, Emma Banks, VP Food & Beverage Strategy & Development EMEA, Hilton kwuru, sị: “Anyị na-ele anya nke ọma na ahịa iji chọpụta ọnụọgụ ziri ezi nke echiche F&B. Ọ bụrụ na ụlọ nkwari akụ na-atụle onye òtù ọlụlụ nke atọ, ụzọ dị mma nwere ike ịbụ ịnwale echiche a na mbido site na iji mmapụta iji chọpụta agụụ ahịa nke ahịa tupu itinye ego na itinye ego ka ukwuu. ”
Chris Abell, osote onye isi oche Food & Beverage MEA, Marriott International, gbasaa na nke a: “Marriott International ga-eleba anya n’ebe ọ bụla enwere ike, iji wuo obere ebe F&B. Gara bụ ụbọchị mgbe anyị nwere na-ewu ụlọ oriri na ọ soleụ soleụ nanị ka afọ ju otu ezu; olu nri ụtụtụ. Ugbu a, anyị na-ahapụ mkpebi ikpeazụ nke echiche ahụ ruo oge kachasị ọhụrụ, iji kwado ahịa ahịa obodo na-agbanwe agbanwe.
Emma Banks kwukwara na ụfọdụ ụlọ nkwari akụ kwesịkwara ịtụle maka ojiji ndị ọzọ dịka ịrụkọ ọrụ ọnụ, iji bulie ego ha ga enweta, karịa ị nwere ike ịnyefe ihe.
Kwalite talent nke obodo bụ ihe dị mkpa maka usoro ụlọ ọrụ mba ofesi na ọrụ F&B ha. Emma Banks kwusiri ike banyere ọrụ ụmụ nwanyị na-abawanye na pọtụfoliyo Africa, na-atụ aka n'ọtụtụ ihe ịga nke ọma na ịrị elu kpakpando nke gosipụtara nnọchi anya Hilton na iche iche. Chris Abell kwusiri ike ka Marriott International si na-ejizi ikike ime obodo eme ihe na kichin ka a na-ebugharị echiche sitere na mpaghara.
Mmepe na-adịgide adịgide bụ ihe ọzọ dị mkpa. Chris Abell gbakwụnyere na ụgbọala Marriott International iji jiri ihe ndị dị na mpaghara wee kwekọọ na ntinye ọkọnọ nke mmemme nkwado na-akwado. Emma Banks kwubiri site na ịkọwa Hiltons '' Big5 'ebe etinyela ego $ 1m iji mee ka njem na njem na-aga n'ihu na Africa.